Barida Qalabka Awoodda
Barida Mitirka Korontada
Qalabka Cabirka Length
Qalabka Cabbiraadda Tayada
Qalabka Cabirka Waqtiga
Qalabka Xisaabta PS
PS Qalabka Sayniska
Qalabka Xisaabta ee MS
Qalabka Jirka ee MS
Gariirka, Wave, Qalabka Thermology
Qalab Ma guurto ah iyo Hada
Qalabka elektromagnetic iyo elektaroniga
Qalabka Fudud iyo Atomiga
Qalabka Kimikada ee MS
Qalabka Biology ee MS
Qaabka Jirdhiska Aadanaha
Qalabka Juquraafiga ee MS
Qalab Wax Lagu Barto Muusig
Sanadkii 2014-kii 65th Bandhigga Qalabka Waxbaridda Qaranka Kunming
HAMBALYO !! SHIRKADDEENA AYAY KAQAYB QAADANAY 2014 2014 TABABBARKA 65 EE QORAALKA QAABKA TABABARKA QARANKA, SI AAD UGU MACAANSAN YAHAY DADKA GANACSATADA AH EE GUDAHA IYO OVERSEA AYAA XIISO LEH BARNAAMIJKEENA, KIIMIJIYADA, JIRKA, QIIMAYNTA UGU MUHIIMSAN ..
Lianying Import and Dhoofinta Ganacsiga Co., LTD. shirkadda websaydhadeeda dib u eegis ballaadhan
Lianying Import and Dhoofinta Ganacsiga Co., LTD shirkadda websaydhkeeda dib u eegis ballaadhan
Yueqing Lianying Import & Dhoofinta Ltd.
Yueqing Lianying Import & Export Ltd, Co. waxaa la heli doonaa Maajo, 2009. Shirkadeena si aan u dhisno una horumarino xiriirkeena ganacsi ee adduunka si aan u qurxino adduunka.
Adeegga Shirkadda LianYing
Isdhexgalka suuqa adduunka, iibsadayaal aad iyo aad u tiro badan ayaa Shiinaha ka soo dajiya noocyada kala duwan ee wax soo saarka. Iyo Shiinaha oo ah waddanka ugu weyn ee soo saara qalabka waxbarasho ee caalamiga ah, wuxuu ka baxayaa faa'iido darrada dhinacyada qaarkood. Tusaale ahaan, u kala firdhinta shirkadaha wax soo saarka ah ...
U jiifinta jacaylka dugsiga aagagga dhulgariirku ka dhacay
Shirkadda Lianying waxay ka jawaabaysaa soo-jeedintii aseismatic-ka ee dhalatay 15-kii, Maajo 2008, oo ay samaysay Qalabka iyo Qalabka Waxbarashada Shiinaha. Ka dib guddiga agaasimayaasha, waxay ugu deeqayaan alaabada asaasiga ah iskuulka musiibada 5.12 Dhulgariirkii WenChuan. Lianying Shirkadda Qalabka Waxbarashada ...
Waxaad ubaahantahay inaad noqoto baacsigeena!
Miyaadan aqoon ku filan ka haysan qalabka waxbarashada? Ma haysaa wax su'aalo ah oo ku saabsan tayada Aaladda Waxbarashada? Taleefoonkaaga ayuu qaadaa, wuxuu garaacayaa kumbuyuutarkaaga, xiriirada aad nala leedahay hadda Waxaan kaa caawin doonaa inaad soo iibsato Qalabka Waxbarashada ee tayadaas iyo qiimaha wada leh. Waa la diri doonaa t ...
WenZhou LianYing Teaching Instrument Co., LTD Company waa soo saare heysta adduunka oo hogaaminaya qalabka waxbarista. Tan iyo markii shiinaha galayo WTO, iyo sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee macluumaadka internetka, degitaanka alaabooyinka shirkadan ayaa lagu ballaadhin doonaa suuqa adduunka. Intaa waxaa dheer, ...
Mabda'eena: - Ku Xidhnow Tacliinta - ——- U Hiili Bulshada ——-
Server-ka websaydhka qalabka waxbaridda ee Lianying ayaa galay dibedda.
Server-ka websaydhka qalabka waxbaridda ee Lianying ayaa galay dibedda. Runtii tani waa wax mudan in loo dabbaaldego. Iyada oo horumarka degdegga ah ee tikniyoolajiyadda shabakadda, Lianying-ku wuxuu ku xiran yahay iyada si ay ugu adeegto macaamiisha si ka wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxaan rajeyneynaa inaan ku riixno "Fasalka Shaqada Qarniga 21aad" g ...
Laanta Shirkada Lianying Enterprise Group
Lianying Education Iyo Technology Co., Ltd.
YueQing Lianying Import and Dhoofinta Ganacsiga Co., Ltd.
Wenzhou Dhaqaalaha iyo Teknolojiyada Horumarinta Aaga Farsamada Machadka Barashada Korontada